Neymar Jr oo sharraxay sababtii uu ugu laaban rabay naadigiisii hore ee Barcelona xagaagii 2019 – Gool FM - Idman news
(Paris) 26 Jan 2022. Weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Neymar Jr ayaa qiray inuu doonayay ku laabashada naadiga Barcelona sanadkii 2019 markaas oo laga joogay labo sano xilli ay PSG 222 milyan oo euro ay Barca kaga soo qaadatay laacibkan.
Warar badan oo soo baxay xilligaas ayaa sheegayay inuusan Neymar ku faraxsaneyn naadiga PSG balse labada naadi ayaa isku af garan waayay heshiiskii uu xiddigan ugu laaban lahaa Camp Nou.
Filim nololeedka (Documentary) Netflix laga sii daayay ee la magac baxay “Neymar: The Perfect Chaos” kaasoo ka sheekeynaya nolosha Neymar ayuu xiddigii hore ee naadiga Santos isagoo arrintan ka hadlaya ku yiri: “Markii aan go’aansanayay inaan ka tago PSG, taageerayaasha iyo kooxduba midna sabab uma ahayn, balse waxaa u wacneyd inaan isu arkay inaan meel kale fiicnaan ku dareemayo”.
Si kastaba ha ahaatee, Barcelona ayaa isku dayday saxiixa 29-sano jirkan suuqa xagaagii lasoo dhaafay, haddana markale waxaa is-hortaagay kooxda Faransiiska ah oo iibkiisa dul dhigtay 200 milyan illaa 300 milyan oo euro.
Dhinaca kale, waxaa barta aflaamta laga daawado ee Netflix laga sii daayay filim nololeedka “Neymar: The Perfect Chaos” shalay oo ay taariikhdu ahayd 25 January 2022, kaasoo uu hoggaaminayo jilaana uu ka yahay isla Neymar, waxaana uu kusoo bandhigay caqabadihii ku gadaamnaa noloshiisa iyo waayaha xirfaddiisa ciyaareed.
Previous Man City oo Dhammeystirtay saxiixa xiddig bartilmaameed u ahaa Man United iyo Liverpool… (Ogow qiimaha ay kula wareegeyso iyo xilliga uu Etihad imaanayo)
Next Saddex ka mid ah Kooxaha waa weyn ee horyaalka Premier League oo ku loollamaya saxiixa Youri Tielemans – Gool FM